Ukraine Oo Garaacday Spain, Jarmalka Oo Guul Loo Diiday Iyo
By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 13, 2020
Tababare Luis Enrique ayaa ka hor tegay Andriy Shevchenko oo ah macallinka xulka Ukraine, waxaana kulankan oo uu kusoo bilowday Sergio Ramos uu isbeddel badani ka muuqday ciyaartoyda Spain oo xiddigihii ruug-caddaaga ahaa ay qaar badan oo ka mid ahi kaydka ku jireen.
Sergio Busquets iyo Sergi Roberto ayay ciyaartu u dhamaatay iyagoo kaydka fadhiya oo aan garoonka soo gelin, laakiin Dani Ceballos, Daniel Olmo iyo Ferran Torres ayaa noqday beddellada uu tababare Luis Enrique kusoo hambabaray ee uu sameeyey markii ay qaybta dambe badhtamaha maraysay, laakiin waxay awood u yeelan waayeen inay waddankooda guul-darro ka badbaadiyaan.
Jarmalka ayaa dagaal adag ka galay goolasha lagala hormaray, waxaana daqiiqaddii 28aad gool rajada usoo celiyey u saxeexay Timo Werner oo difaaca Switzerland ugu awood sheegtay xirfaddiisa hibada ah ee keentay in Chelsea ay lacagta badan ka bixiso xagaagii tegay.
Qaybta hore ayaa kusoo dhamaatay 1-2 ay hoggaanka la nasatay Switzerland, laakiin markii qaybta dambe ay xoogaa socotay ayuu Kai Havertz goolka barbarraha u dhaliyey waddankiisa Jarmalka, laakiin laba daqiiqadood oo kaliya kaddib ayay haddana Switzerland hoggaanka la wareegtay iyadoo uu gool soo gaabiyey farxadda Jarmalka u dhaliyey Mario Gavranovic oo laba gool saxeexay intii ay ciyaartu socotay.
Shan daqiiqadood oo musalsal ahaa oo saddex gool la iska dhaliyey ayuu soo afjaray Serge Gnabry oo daqiiqadii 60aad goolka barbarraha u dhaliyey qarankiisa Germany, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 3-3 ay labada waddan dhibcaha ku qaybsadeen.
Afarta waddan ee Spain, Germany, Switzerland iyo Ukraine oo ku wada jira League A Group 4 ayaa waxa hoggaanka u haya Spain oo haysata toddoba dhibcood waxaana ku xiga Jarmalka oo leh 6 dhibcood iyo Ukraine oo 6 dhibcood haysata laakiin dhinaca goolasha kaga dambaysa Jarmalka, halka Switzerland ay kaalinta afraad ee ugu hoosaysa ku jiro oo ay leedahay laba dhibcood oo kaliya.
Natiijooyinka kulamadii kale ee UEFA Nations League:
Foroe Iceland 2-0 Andora
Jurgen Klopp Oo Qirtay In Dhaawac Halis Ahi Gaartey…